I Feel Pretty (2018) – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
PG-13 2018 110 min Biography, Comedy
Adrian Martinez, Aidy Bryant, Amy Schumer, Busy Philipps, Emily Ratajkowski, Lauren Hutton, Michelle Williams, Naomi Campbell, Rory Scovel, Tom Hopper
ကွန်ဖီးဒန့်ရှိလို့ လှတာလား? လှလို့ ကွန်ဖီးဒန့်ရှိတာလား?ဒီဇာတ်ကားထဲက ရီနေးကတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကို မလှဘူးဆိုပြီး စိတ်ဓာတ်ကျနေသူပါအလှကုမ္ပဏီမှာ ကောင်တာထိုင်အလုပ်နေရာအတွက်လျှောက်ထားချင်သော်လည်းအလုပ်ခေါ်စာမှာ ကုမ္ပဏီရဲ့အလှမျက်နှာဖုံးဖြစ်ရမယ်ပါတော့လက်လျှော့ခဲ့တယ်
တစ်နေ့တော့ ရေပန်းတစ်ခုမှာလှလာပါစေလို့ ဆုတောင်းလိုက်တယ်နောက်နေ့မှာတော့ လေ့ကျင့်ခန်းစက်ဘီးပေါ်ကပြုတ်ကျပြီးနောက်မှာ ခေါင်းထိသွားတယ်
ပြန်နိုးလာတဲ့အချိန်မှာတော့ခန္ဓာကိုယ်က ဘာမှ မပြောင်းလဲသွားပေမယ့်သူကိုယ်သူ အလှကြီးလှတယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်စိတ်ရသွားပါတယ်။
အဲ့စိတ်နဲ့ပဲ အလုပ်လျှောက်တော့ အလုပ်ရရည်းစားရ အဆင်ပြေခဲ့ပေမယ့်အရမ်းကွန်ဖီးဒန့်ရှိတဲ့မာန်မာနကြောင့်လူအများနဲ့ တစ်ဖြည်းဖြည်းဝေးကွာလာပါတော့တယ်။ဒီကွန်ဖီးဒန့်အပြည့်ရှိနေတဲ့ စိတ်က တစ်သက်ခံပါဦးမလား?လူတွေနဲ့ရော ပြန်အဆင်ပြေမလား?ကွန်ဖီးဒန့်က အရေးကြီးလား?လှဖို့က အရေးကြီးလား?
ဘယ်အရာက အရေးကြီးမလဲဆိုတာ ရှုစားကြည့်ပါနော်
Adrian Martinez Aidy Bryant Aina Adler Amy Schumer Anastagia Pierre Friel Andrea Kostovick Angela Davis Benz Veal Busy Philipps Camille Kostek Caroline Day Chloe Hurst Dakota Lustick Danielle Lyons Dave Attell Emily Ratajkowski Gia Crovatin Jacqueline Giraldo Jeffrey Grover Kevin Kane Kyle Grooms Lauren Hutton Lexie Roth Mandy Schmieder Michelle Williams Monib Abhat Naomi Campbell Nikki Glaser Olivia Culpo Paul McCallion Phil Hanley Rachel Feinstein Rory Scovel Sarah Fischer Sarah Newhouse Sasheer Zamata Tom Hopper Tony Viveiros William Ambrose Kennedy Yvette Williams
Option 1 megaup.net 1 GB HD
Option2drive.google.com 1 GB HD
Option3cloud.msubmovie.com 1 GB HD
The White Crow (2018) 2018